Kubada Dhaliska Horseed – Horseed Sports Club
Horseed oo Maanta la Ciyaari Doonta Naadiga Banaadir
Kooxda Kubada Cagta Horseed ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya ayaa Galabta waxa ay Ciyaar adag la Dheeli Doontaa Naadiga Banaadir SC waxaa Labadaan Naadi ka dhaxeyso Xifaaltan Adag oo dhanka Kubada Cagta ah Naadiga Horseed Haday Galabta ka Badiso Banaadir waxay soo Gali Doontaa Kaalinta Sadaxaad ee Horyaalka Kubada Cagta ee Soomaaliya Gudoomiyaha Kooxda Horseed
Naadiga Horseed oo Tababaro diyaargarow ugu jirta Horyaalka Soomaaliya
Kooxda Kubada Cagta Horseed ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya ayaa u diyaar garoobaysa Tartanka Horyaalka Soomaaliya ee dhawaan ka furmidoona Garoonka Koonis ee Magaalada Muqdisho. Naadiga Horseed ayaa sanadka lasoo saxiixatay Xidigo tayo wangsan leh Xidigaha Horseed ayaa tababarka qaatay subax iyo galab Macalinka naadiga kubada cagta horseed ayaa sheegay in sanadkaan Naadiga
Wasiirka Dhalinyarada iyo isboortiga xukumada fadareelka somaaliya Saraakiil ka Tirsan Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya xirirka kubada cagta soomaaliya ayaa maanta is wadajira ah u furay Xafiis cusub oo ay ku howlgali doonto Naadiga Kubada Cagta Horseed ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya. Kilar oo ka mid ahaa ciyaartooydii bariisi madkii u ciyari jirtey Kooxda ku bada
Taliska Xoogga Dalka Soomaaliya oo xafiis ku meel gaar ah u furay Naadiga Horseed(Sawirro)
Gabdhaha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa booliska oo galabta wada dheeli doona finaalka horyaalka kubada Kolegya Gabdhaha
Waxaa galabta lagu wadaa in garoonka Wiish uu matrti geliyo kulanka kama dambeysta horyaalka kubada Koleyga Gabdhaha. Kulankan waxaa ku loolami doona kooxaha Horseed iyo Heegan oo kala matalaa Ciidanka Xooga aiyo Booliska. Horseed waa kooxda Daafacaneysa koobkan waxayna dooneysaa in ay markale gacanta ku dhigto halak Heeegan ay koobkan u ooman tahay hanashadiisa. Labada
Gabdhaha Horseed oo ku guuleystay koobka 15 May+Sawirro
Gabdhaha kubada Koleya Horseed ayaa gacnata ku dhigay koobka lagu xusayay munaasabadda maalinta dhalinyarada Soomaliyeed 15 May, waxaana daawashada ciyaarta kasoo qayb galay masuuliyiin ka socotay Wasaaradda dhalinyarada iyo Isboortiga iyo xiriirka kubadda Koleyga. Kulanka oo dhanka kale ka tirsanaa horyaaalka kubadda Koleyga Gabdhaa 2015-16 ayay Gabdhha Horseed dhigooda Olympic Fitness Centre kaga adkaadeen 34-21.
Maxay kusoo dhamaatey kulankii adkaa ee kooxaha Horseed iyo Signjet
Qeybtii hore ee cayaarta ayaana lagu kala maray gool uu Signjet hogaanka ugu dhiibay Liibaan Mukhtaar daqiiqaddii 26aad. Saadaq Nuur Geelle ayaa goolka labaad u dhaliyay Signjet daqiiqaddii 23aad ee qeybtii labaad. Wiilka lanbarka 10aad u qaata Signjet ayaase cayaarta laga saaray daqiiqaddii 74aad, markuu qaatay kaarka cas. Daqiiqad kaddib gool ku laad loo dhigay
Hoyaalka Soomaaliya:Horseed iyo Sanjaj oo galabta isku dhagan
Kulan aad u xiisa badan oo ka tirsan horyaalka soomaaliya ayaa waxaa galabta wada dheeli doona Kooxaha kala ah horseed iyo Sanjaj. Kooxda uu hogaamiyo (Cali Buu) ee Horseed iyadana kulankii ugu dambeeyay waxaa ka badisey Naadiga Horyaalka hogaamineyso Horseed ayaa hada ku jurta booska 6-aad ee kala sareynta iyadoo leh 26-dhibcood. Horseed macalinka hogaamiya
Maxoo ku dhamaadey kulankii adkaa Banaadir SC iyo Horseed
Gegada Banaadir Stadium galabta waxaa isku foodsaaray kooxaha Banaadir SC iyo Horseed oo wada cayaaray kulankii toddobaadkan horyaalka ugu xiisaha badnaa. Banaadir SC ayaa kahor kulanka maanka ku heysay guushii shalay ay gaartay kooxda ku soo xigta Jeenyo iyo ilaashiga guulaheeda joogtada ah. Inkastoo 45tii daqiiqo oo hore la ismari waayay, hayeeshee bilowgii qeybtii labaad
Horseed iyo Banaadir’ SC oo galabta isku dhagan
Kooxda kubada cagta horseed oo galabta la dheeli doonaan Naadiga hogaamineyso Horyaalka soomaaliya Banaadir S’C Kulanka ayaa ah mid aad u xiisa badan Maadama Labada kooxood ay u ciyaaraan ciyaartooy Ajanabi ah. Ciyaarta ayaa soo gali doonto sacada marka ay tahay 3:30 galabta Madaxa hogaanka Naadiga Horseed General Ceynte oo la Hadley websetka Kooxda horseed